Choputa ogige ntụrụndụ nke Má Mágica na Seville | Akụkọ Njem
Isla Mágica na-bụ ogige ntụrụndụ dị na Seville ọ bụkwa otu n’ime ogige ntụrụndụ ndị mbụ mepere emepe n’ụwa, ebe ọnụ ọgụgụ ka ukwuu dị n’ebe dị anya site n’obodo ndị ọzọ, n’ebe ndị zoro ezo. Ogige a toro na oge ugbu a, ọ bụghị naanị na ọ nwere ebe nkiri, kamakwa ọ nwere mpaghara mmiri.
Ka anyi mara nke uku a ogige ntụrụndụ ị nwere ike ịga ọ bụrụ na anyị nọ n'obodo Seville. N'ịbụ onye nọ n'obodo ahụ, ọ dịghị mkpa ịga njem ma ị nwere ike iji otu ụbọchị wee hụ mpaghara a. N’ogige ahụ enwere obi ụtọ maka ezinụlọ dum, na-adọrọ mmasị ụmụaka na ndị okenye.
1 Otu esi aga Isla Mágica
2 Gburugburu ebe
2.1 Seville, Port nke ndị Indies
2.2 Ọnụ Americazọ Americamá America
2.4 Pirates 'Den
2.5 Isi Iyi nke Ntorobịa
2.7 Ime Anwansi
Otu esi aga Isla Mágica
Ogige a isiokwu dị na obodo mepere emepe nke Seville, na Isla de la Cartuja a ma ama. Naanị ụkwụ ise na ụkwụ bụ ebe akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ, ya mere enwere ike iru ya na obere oge ma ọ bụrụ na anyị nọrọ na mpaghara a. Na nkeji iri na ụgbọ ala ọ ga-ekwe omume iru ọdụ ụgbọ elu Seville, yabụ ogige isiokwu ahụ dị nke ọma.
Nke a park si n'ike mmụọ nsọ site nchọpụta nke America ma malite na 1997. Ejiri ụfọdụ ụlọ ọrụ si Expo 92 kee ya. N'ime ogige ahụ, enwere mpaghara mpaghara isii dị iche iche na mpaghara mmiri. Emepụtara ogige mmiri ahụ na 2014, ebe kachasị nso.
Seville, Port nke ndị Indies
Mpaghara a bụ Site n'ike mmụọ nsọ nke narị afọ nke XNUMX Seville na ndị na-eji ejiji oge. E nwere mmepụta abụọ nke caravels ị nwere ike ịbanye. Ime Anwansi Carousel bụ ọmarịcha vinteji-nke abụọ-akụkọ na-atọ ọchị-na-aga-gburugburu nke dị na expo. Ihe ma Aka bụ a dobe dobe na-agba ịnyịnya. Na La Travesía ị nwere ike ịga njem ụgbọ mmiri gburugburu mpaghara ọdọ mmiri. Na akụkụ nke Buccaneers ị pụrụ ịnụ ụtọ na-agbapụ na mmiri pistols na fun agha. E nwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, otu na-eri nri tapal Andalusian na nke ọzọ na-eri nri Italiantali.
Ọnụ Americazọ Americamá America
Na oghere a bụ Nkera nke San Felipe, nke a na-eme ihe ngosi egwu. N'abalị, e nwere ihe ngosi ọzọ na mpaghara amphitheater nke ọdọ mmiri ahụ. O nwere anaconda mma, otu n'ime ndị kachasị ewu ewu, igwe na-agba mmiri. Potgbọ okporo ígwè Potosí bụ ụgbọ elu ezinụlọ na Barbarroja hipgbọ mmiri ị nwere ike ịnya ụgbọ mmiri na-ama jijiji. N’ebe a enwere ebe egwuregwu na ọtụtụ ụlọ nri na ụlọ ahịa.
Ndị Amazon sitere n'ike mmụọ nsọ a dị egwu, ịbụ ebe akwụkwọ ndụ juru. Iguazú bụ otu n'ime ebe nkiri kachasị mma, nke nwere nnukwu ụgbọ mmiri na-agbadata na mmiri slide. Jaguar bụ igwe na-agbanwe agbanwe. Llamas bụ ihe na-adọrọ mmasị ụmụaka na Topetazú bụ ụgbọ ala ụmụaka.
Nke a bụ ebe nke ndị ohi nke Isla Mágica, otu n'ime ebe kachasị amasị ụmụaka. Captain Balas bụ njem mmekọrịta na egbe laser. Na Dimension 4 ị nwere ike ịnụ ụtọ mmetụta 3D. Na Los Náufragos ị na-eme njem site na gbọmgbọm. Na Los Toneles ị nwere ike ịtụ ha na oke ọsọ.
Isi Iyi nke Ntorobịa
Nke a bụ ebe zuru okè maka obere ụmụaka, ebe obu ebe obu maka ha. Cayman Bailón bụ obere mmiri na-agba mmiri na Chrysalis bụ ihe na-atọ ọchị. The Jumping Frog bụ ugwu nke nwere ọdịda na-akwụghị ụgwọ yana na Rueda Primavera ị nwere ike ịnụ ụtọ wiilị ụmụaka.
En El Dorado ị nwere ike ịnụ ụtọ The Flight of the Falcon, oche ndị na-ekwo ekwo bụ́ ndị na-efe gburugburu. Na Rapids nke Orinoco a na-eme njem site na ihe eji eme ihe.
Nke a bụ mpaghara kachasị ọhụrụ ka etinye ya na ogige isiokwu, nke mepụtara ogige mmiri n'ime oghere. Na Ime Anwansi Mmiri ọ bụ ebe kachasị mma ịnụ ụtọ oge ọkọchị. Enwere ebe maka onye ọ bụla, dịka Anillas Reef, nke ị ga-agafe ọdọ mmiri na-agafe mgbanaka ma nwalee ike gị. Osimiri Pool bụ ọdọ mmiri maka onye ọ bụla na Splash Reef bụ obere ọdọ mmiri maka ụmụaka. E nwere oghere ndị ọzọ dị ka Relax Reef ma ọ bụ akara zip nke mejupụtara akụkụ a na mmiri. The Island of Slides bụ otu n'ime akụkụ ya kachasị ịtụnanya, ya na nnukwu slides nke na-asọba n'ime ọdọ mmiri. Mini Paraíso bụ ọdọ mmiri na-emighị emi nke nwere ihe nkiri slide maka ụmụaka. Onye ọ bụla nwere ike izu ike na mpaghara Playa Quetzal nwere oke osimiri na mmiri iyi. Njem a ga-ejedebe na Río Lento, obere osimiri ị nwere ike iji ụgbọ mmiri mee njem.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Sevilla » Isla Mágica, ogige ntụrụndụ na Seville